Аввакум 3 CARSA - Habakuk 3 AKCB
1Saa mpaebɔ yi, Habakuk too no sɛ dwom:
Na wʼanwonwadwuma a woayɛ no, me ho adwiriw me.
Yɛ no foforo wɔ yɛn mmere so.
Yɛn mmere yi mu, ma wonhu.
Wʼabufuwhyew mu no, kae wo mmɔborɔhunu.
3Onyankopɔn fi Teman bae,
Ɔkronkronni a ofi Bepɔw Paran so,
Nʼanuonyam kata ɔsoro,
na nʼayeyi hyɛ asase so ma.
4Ɔhyerɛn sɛ anɔpawia
Hann no nsensanee twa yerɛw fi ne nsam,
Ɛhɔ na ne tumi ahintaw.
Na nsanyare di nʼakyi pɛɛ.
6Sɛ ogyina a, asase wosow.
Sɛ ɔhwɛ a, ɔma aman wosow.
Tete mmepɔw dwiriwii,
na nkoko a efi tete no ka kataa so.
Nʼakwan ntwa mu da.
7Mihuu Kusanfo ntamadan a atetew
ne Midianfo3.7 Kusan…Midian—Wɔyɛ Araia mmusuakuw. Awerɛhow…ahoyeraw—Bere a woyii Israelfo fii Misraim nkoasom mu no, nnipa a wɔbemmɛn wɔn no bɔɔ hu. (2 Mose 15.14-16; Yos 2.9-10). atenae a agyigya.
8Awurade, wo bo fuw nsubɔnten no?
Wʼabufuw no tiaa nsuwansuwa no?
Wosɔre tiaa po,
bere a wo ne wʼapɔnkɔ
ne nkonimdi nteaseɛnam nam no.
9Wuyii wo tadua,
Woma wɔde agyan bebree brɛɛ wo.
Wode nsubɔnten paapae asase mu.
10Mmepɔw huu wo, na wɔwosowee
Osuhweam bɛsen kɔe.
Bun no woroo so,
na ehuru baa soro.
11Owia ne ɔsram gyinagyinaa sorosoro hɔ,
bere a wohuu wʼagyan a ɛnenam wim no hann,
ne wo peaw a ɛpa yerɛw yerɛw no.
12Wʼabufuwhyew mu no, wonantew twaa asase so
na wode abufuw tiatiaa aman no so.
13Wobaa se worebegye wo nkurɔfo,
na woagye nea wɔasra no no nkwa.
Wopɛtɛw atirimɔdenfoman no kannifo,
wopaa ne ho ntama fi ne ti so kosii ne nan ase.
14Wode nʼankasa peaw hwirew ne ti mu,
bere a nʼakofo bɔɔ yerɛdɛ sɛ wɔrebɛhwete yɛn mu.
mmɔborɔfo a wɔakɔ agua no ase koraa.
15Wode wʼapɔnkɔ tiatiaa po no mu,
ma asu kɛse no hurui.
16Metee no, me koma tui,
nnyigyei no maa mʼano poo biribiri;
ɔporɔw hyɛn me nnompe mu,
na me nan wosowee.
Nanso mɛtɔ me bo ase atwɛn akosi sɛ
amanehunu da bɛba ɔman a wɔtow hyɛɛ yɛn so no so.
17Ɛwɔ mu, borɔdɔma nnua no nguu nhwiren,
ɛwɔ mu, ngodua no adi huammɔ
na mfuw no mmɔ aduan.
Ɛwɔ mu, nguan biara nni buw no mu,
na anantwi nso nni ban no mu.
18Nanso mʼani begye Awurade mu;
me ho bɛsɛpɛw me wɔ Onyankopɔn a
19Otumfo Awurade yɛ mʼahoɔden.
Ɔma me nan yɛ sɛ ɔforote de,
ɔma me nantew sorɔnsorɔmmea.
Wɔmfa mpae yi mma nnwonto kwankyerɛfo no. Na wɔnto no wɔ mʼasanku no so.
AKCB : Habakuk 3